Amrita Singh”Gabadha Kareena Kapoor xadka ayay dhaaftey” - Hablaha Media Network
Amrita Singh”Gabadha Kareena Kapoor xadka ayay dhaaftey”
HMN:- Saif Ali Khan gabadhiisa curada ah Sara Ali Khan ayaa laga soo bandhigay maalmo ka hor sawiro aan la jacleesan karin xili ay gabadhaan meel Hotel ah dhalinyaro kula caweeneesay.
Hadaba Sara Ali Khan oo ah hooyada dhashay Sara Ali Khan ayaa siweyn uga carootay gabadheeda talaabada ay qaaday iyo in nolosheeda gaarka ah ay xadka ka talaabto lagana soo bandhigo sawiro ay dhexda kaga jirto dhalinyaro ragg ah oo ay la caweeneesay.
Hooyo Amrita Singh waxay eed dusha kaga tuurtay Kareena Kapoor Khan oo ah xaaska Saif Ali Khan sidoo kalena eedo u ah Sara Ali Khan.
Amrita Singh waxay sheegtay in gabadheeda qalad walbo oo ay gasho Kareena Kapoor sabab u tahay madaama ay ka dhigtay qof ilbax ah ayadoo caruur ah.
Sawirka sare ka muuqdo Sara Ali Khan dharka ay xiran tahay waxay sheegtay Amrita inay Kareena u xirtay oo ay siisay xili ay Fashion wada sameenayeen.
Sidaa darteed Amrita Singh waxay sheegtay in gabadheeda wax walbo oo ay sameyso Kareena Kapoor Khan sabab u tahay!
Kareena ayaa horey u sheegtay inay Sara Ali Khan saaxiib dhow la tahay sidoo kalena aad u tixgaliso inta badana ay waqti wada qaataan.
Hadalka kasoo yeeray Amrita Singh waxaa ku gacan seertay gabadheeda Sara Ali Khan oo sheegtay inay tahay qof weyn oo garaad u leh waxa ay sameeneyso qalad iyo sax waxa ka dhalan karo.
Sara Ali Khan ayaa lagu wadaa inay dhawaan Bollywood-ka kusoo biirto waxaana soo saari doono Karan Johar shirkadiisa Dharma Productions.